I-Xiaomi Mi 11T Pro: iselfowuni enamandla ngexabiso elilungelelanisiweyo esele lithengisiwe | I-Androidsis
I-Xiaomi Mi 11T Pro: iselfowuni enamandla ngexabiso elilungelelanisiweyo esele lithengisiwe
UXiaomi kutshanje uzise enye yezona zixhobo zakhe zinamandla ngexabiso elihlengahlengisiweyo. Yimodeli Xiaomi Mi 11T Pro, Ngeempawu ezibonakala njengemodeli yeprimiyamu, kodwa ngaphandle kokutyala imali kwiwaka leerandi. Ke, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga neyona nto iya kuba yeyona nto iphambili kule nkampani ngexesha elilungileyo, nantsi yonke into ekufuneka uyazi.
1 Iimpawu zobugcisa zeXiaomi Mi 11T Pro
1.1 I-SoC kunye nememori
1.5 Unxibelelwano kunye nokongezwa
1.6 Inkqubo yokusebenza
1.7 Uyilo kunye nokugqiba
2 Uyifumana njani iXiaomi Mi 11T Pro ngesaphulelo
Iimpawu zobugcisa zeXiaomi Mi 11T Pro
IXiaomi Mi 11T Pro inayo Iimpawu zobugcisa ezokushiya uvule umlomo. Kuncinci ukumonela i-Samsung Galaxy S-Series kunye ne-Apple iPhone ebiza ngaphezulu kwe-900 euros.
I-SoC kunye nememori
IXiaomi Mi 11T Pro ikhethe ukunyusa enye yeetshipsi ezinamandla kwimarike, Qualcomm Snapdragon 888. Icandelo elenziwe kwitekhnoloji ye-5nm kwi-TSMC, ukunciphisa ukusetyenziswa kunye nokwandisa ukusebenza. Nge-8 Kryo 680 cores ngenkxaso enkulu.INCINCI enako ukuhambisa ukusebenza okuphezulu xa ifuneka, kunye nokusebenzisa ezona cores zisebenzayo xa kungekho mandla makhulu akhutshiweyo okonga ubomi bebhetri.
Akhawunti I-1x Cortex X1 kwi-2.84 Ghz, 3x Cortex-A78 kwi-2.94 GB, kunye ne-4x Cortex-A55 kwi-1.8 Ghz. Ikwaquka enye yemizobo enamandla kwezentengiso, ezinje ngeAdreno 660 GPU ekwaziyo ukuxhasa i-OpenGL 3.2, i-OpenCL 2.0 FP, kunye neVulkan 1.1 API, kunye neDirectX 12. kunye neeapps.
Ikwaxhasa i-UFS 3.1 yokufikelela kwimemori ngokukhawuleza. Kwaye ukhethe ubumbeko lwe-8-12 GB yohlobo lwememori ye-RAM LPDDR5. Ngokubhekisele kwimemori yangaphakathi, inokufumaneka kwi 128GB kunye ne-256GB.
Ikwadibanisa ezinye iiprosesa ezinje ngeQualcomm Spectra 580 ejongene nomfanekiso wefoto kunye nevidiyo, iHexagon 780 DSP yokuqhutywa kwemiqondiso yedijithali, izandiso zevektha ukukhawulezisa ukuqhubekeka, kunye Izikhawulezisi zeTensor kunye neScalar yezicelo zobukrelekrele bokuzenzela. Ngamafutshane, ukusebenza okugqithileyo okunanditshwa ziiselfowuni.
Le fowuni inomdla omnandi 6,67 ”isikrini. Iphaneli enkulu ye-AMOLED ezakubonisa abamnyama abacocekileyo kunye nokugcinwa kwebhetri okuhle. Isisombululo sayo yi-FullHD +, oko kukuthi, i-2400x1080px, ene-pixel ephezulu, kunye nomlinganiso we-20: 9, ukonwabela umxholo wemultimedia ngendlela enkulu. Ixhasa i-TrueColor ngombala otyebileyo kunye ne-HDR10 +.
Kubadlali beevidiyo kunye nabalandeli bevidiyo, sikhethe ukusebenzisa inqanaba lokuhlaziya eliphezulu kakhulu, I-120 Hz. Ukongeza, inqanaba lokuhlaziya isikrini sokuthinta yi-480 Hz, eya kukunika ujongano oluhlaziyiweyo lokunxibelelana nayo.
Ngokwe-robust, esi sikrini sinayo yakutshanje kwiglasi yokukhusela, njengoko kunjalo netekhnoloji ICorning Ixhoba leGlasi yeGorilla. Yinguqulelo yesi-7 yolu hlobo lokhuselo, kwaye ithembisa ukumelana nethontsi ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-2 ngaphandle kokophula kunye nokhuseleko olungcono kwimikrwelo.
Ukuba ufuna ikhamera yedijithali yobungcali epokothweni yakho, Xiaomi Mi 11T Pro yile nto uyifunayo, kuba inekhamera ephambili yemultisensor. Inememori ephambili ye-108 MP f / 1.75 OIS. Kwaye iyancediswa yi-8 MP f / 2.2 kunye ne-120º ye-angle-angle sensor, kunye ne-5MP f / 2.4 telemacro ye-7 cm ye-OIS. Ikhamera ekwaziyo ukuthatha iifoto ezikumgangatho ophezulu, ukongeza ukurekhoda ividiyo kwi4K.
Ikhamera yangaphambili nayo ilungile Iifowuni zevidiyo kunye neeselfie, Inzwa ye-MP eyi-16 kule meko, kunye nokuvulwa kugxilwe kwe f / 2.45.
Ukunika amandla eli rhamncwa, uXiaomi usebenzise ibhetri enkulu ye-Li-Ion enomthamo 5000mAhOko kukuthi, unako ukuhambisa yangoku ii-amps zeyure enye ngexesha. Oku kuya kukunika ukuzimela ngokubanzi, ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-5 nge-avareji kuxhomekeke ekusebenziseni.
Ukongeza, iyaxhasa Ukutshaja ngokukhawuleza okukhulu kwi-120W, ukuze ibhetri ibuyele kwi-100% ngokuqhwanyaza kweliso. Ukuba ityala lisetyenziswe ngesantya esipheleleyo, ibhetri iya kuhlawuliswa ngokupheleleyo kwimizuzu eli-17 kuphela.
Unxibelelwano kunye nokongezwa
I-Xiaomi Mi 11T Pro inenkxaso ye Ubuchwepheshe be5G, ukuhamba nedatha ngesantya esiphezulu, nangona ikwaxhasa i-4G LTE ukuba awukabinayo le nethiwekhi kwindawo yakho. Inesixhumi se-USB-C sokutshaja okanye sokunxibelelana nePC okanye ezinye izixhobo, iBluetooth 5.2, NFC, kunye neWiFi 6.
Kwelinye icala, ineminwe yokufunda kwiscreen esinye, kunye nenkxaso ye IYIMBINI, ukukwazi ukufaka ukuya kuthi ga kwii-SIM khadi ezimbini ukusebenzisa amanani amabini ahlukeneyo kwisixhobo esinye, njengomsebenzi kunye nobuqu ...
Own a Inkqubo yokusebenza ye-Android 11, Zonke iinkonzo ze-GMS. Njengesiqhelo, iXiaomi isebenzise umlinganiso wayo we-MIUI 12, kule nkqubo kaGoogle. Ujongano olubonelela ifowuni ngezinye izinto eziluncedo kunye nemisebenzi yokuphucula ukusetyenziswa.
Unako ukuhlala unezinto zakutshanje ekusebenzeni, kwimisebenzi nakukhuseleko, kuba unako hlaziya ngokulula nge-OTA.
Uyilo kunye nokugqiba
Esi siphelo silula, kuthathelwa ingqalelo ubungakanani besikrini sayo, kuba inobunzima kuphela I-204 gram. Ngokumalunga nobukhulu, zi-164.1 × 76.9 × 8.8 mm. I-terminal ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo yokugqiba onokukhetha kuyo: mnyama, mhlophe, bomvu, tyheli, luhlaza, noblowu.
Inazo neenkcukacha ezibalulekileyo, ezinje nge Isiqinisekiso se-IP53 oko kuyenza ukuba inganyangeki eluthulini kunye nolwelo oluchaphazelayo. Kwaye ayisiyiyo yonke loo nto, bakuxhobile iXiaomi Mi 11T Pro ngenkqubo yokuhambisa ubushushu egumbini lomphunga, ukuze ukonwabele ezonaapps zifunwa kakhulu kunye nokudlala ngelixa ugcina ubushushu obulungileyo beprosesa yakho.
Uyifumana njani iXiaomi Mi 11T Pro ngesaphulelo
Ukuba uthandile Xiaomi Mi 11T Pro, ungayifumana ngoku ngesaphulelo se-50% Kwi-Aliexpress. Kufuneka nje Cofa apha. Apho unokukhetha phakathi kweendlela ezimbini ezikhoyo:
I-Xiaomi Mi 11T Pro ene-8 GB ye-RAM kunye ne-128 GB yememori yangaphakathi- € 615,56
I-Xiaomi Mi 11T Pro ene-8 GB ye-RAM kunye ne-256 GB yememori yangaphakathi- € 842,87
Ke wena, yeyiphi ekuqinisekisileyo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Xiaomi Mi 11T Pro: iselfowuni enamandla ngexabiso elilungelelanisiweyo esele lithengisiwe
Sele iyinyani: IXiaomi Mi 11 Lite NE ifika emakhayeni ethu